33Across: In-Tarisa Vateereri Kuita Mari neiyo Pre-Bhidha Yekubiridzira Sefa | Martech Zone
Isu takaona vaparidzi vepamhepo vachinetseka gore rino. Zvizhinji zvekuwedzera kwavo zvemukati zvakaburitswa, vakawedzera yavo misoro kufukidzwa, vakatenga vateereri kuti vawedzere yavo yekuona manhamba, uye vakavhura yavo saiti kune chero kana ese kushambadzira. Ini pachangu, ndinotenda iko kukanganisa. Isu takadzivisa kutenga vateereri, tikachengeta misoro yedu yakasimba, uye isu takaramba kushambadzira kakawanda kubva kune-kwenyaya kushambadzira
Nekutenda, kushambadzira network dziri kupindura. Inofungidzirwa kuti $ 160 bhiriyoni ichashandiswa pasirese kushambadzira kwedhijitari gore rino, sekureva kwa Juniper Research. Mapuratifomu akafanana 33Pose vari kutarisira kuenzanisa mashandisiro evatengi nekushambadzira kwepamhepo kwekuita kukuru pane kungo tarisa pakuonekwa kwema metric. Vashambadziri uye maCMO anogara achida kutsigira iyo ROI kubva kune yavo yepamhepo kushambadzira. Maindasitiri zviyero seMedia Ratings Council (MRC), akaisa bhawa zvakanyanya pasi kana zvasvika pakuona kana kushambadza kuchinzi inoonekwa.
Nharembozha uye Desktop kushambadzira kuona kunoda kanokwana 50% yemapikisheni mukutarisa kweinenge sekondi imwe chete yekuratidzira kushambadzira, maviri masekondi evhidhiyo kushambadzira. MRC
Kudivi rekuseri, vaparidzi vari kunetsekana nemabatiro emari emawebhusaiti avo. Vatengi vari kuora moyo, kuputirwa nemishumo isina basa kana kukanganisa pavanenge vachidya zvemukati. Idzi ndidzo nyaya uye ongororo yakadzama yevatengi kubatanidzwa nezviratidziro zvepamhepo zvakagadzira dhizaini uye kusimudzira kwezvinhu zviviri zvitsva kubva 33Pose.
Nyowani Vhidhiyo uye Ratidza Ad Uniti Unopa Iyo Yakanyanya Kuonekera indasitiri
33Pose yakawedzera chirongwa chayo chepuratifomu nekutanga kwe Desktop Mune-Yekudya Vhidhiyo uye Desktop Mune-Kupa Impact. Yakagadzirirwa kubatsira vaparidzi kutyaira mari inowedzera, izvi zvigadzirwa zvitsva hazvivhiringidze, zvakakomba zvikamu zveasiti zvinowoneka mukati mezviri mukati mewebhusaiti kana chikafu chekudya. Iwo maayuniti ezvipikuro anopindura kune yekushandisa scroll scroll uye anoramba achionekwa chero bedzi iyo yekugadzira ingangoita makumi mashanu muzana mukutarisa.
Sezvo vhidhiyo ichienderera ichikura mukuzivikanwa, 33Pose'Desktop In-Kura Vhidhiyo ad mauniti anozvitamba otomatiki 15- uye 30-masekondi mavara ano gadziridza ekuona nharembozha uye desktop, ichionekwa mune zvemukati hova kana iyo yekugadzira ingangoita 50 muzana mukutarisa. Kamwe kunze kwekuona kwemushandisi, vhidhiyo inomira uye inotangazve kutamba kana ichinge yaonekwa. Izvo zvigadzirwa zvitsva zvakagadzirirwa unobtrusive mushandisi zviitiko, zvichipa vatengi kudzora kwakazara pamusoro pechiitiko, nesarudzo yekugadzirisa vhoriyamu kana kuvhara kushambadza.
Kuti tiitise mari yedu saiti zvizere, tinofanirwa kupindura kune zvido zvevashandisi zvinoda chiitiko chisingaite-dhiraivhu pane desktop uye nharembozha pamwe nezvinodiwa nevatengi venharembozha kutanga, mune-zvigadzirwa zvekudya zvinopa kutaridzika kwakanyanya. Peter Cunha, Kuisa Chiteshi
Kuongorora kweInternet Ads Kunoratidza Peak Yevashandisi Engagement Nguva
Zvigadzirwa zvitsva zvinoratidza 33Pose'ongororo ichangoburwa, kuyera kuti kutaridzika kwemashambadziro epamhepo uye kureba kwenguva kushambadza kuri mukutarisa kuti izvo zviviri zvinokanganisa sei kusangana kwevashandisi. Mushure mekuongorora 160 mamirioni epamhepo kushambadzira pamasiti 738 evaparidzi kwevhiki imwechete, 33Kwese kwakawanikwa kuti paavhareji, vatengi vazhinji vanodzvanya kushambadza pamaminetsi gumi neshanu uye kuita kwakadzikira nekufamba kwenguva. Yakaputsika pasi nedhizaini:
50% yemushandisi kubatanidzwa yakaitika pane desktop mushure memasekondi gumi nemashanu
Pane mbozhanhare uye mahwendefa, 50% yevashandisi kubatika yakaitika mushure memasekonzi manomwe
Pakazosvika 30-yechipiri mucherechedzo, 68% yezvese zvekuita zvakaitika padesktop, 74% yakaitika parunhare, uye 78% yakaitika pahwendefa.
Kuongorora kunoratidza kuti kushambadzira kwepamhepo kunoshanda, kushambadza kunofanirwa kuve kuchionekwa zvakanyanya uye mukutarisa kupfuura izvo zvazvino zvinodiwa.
Kana chikuru mushambadzi metric kuri kutaridzika kunoenderana neMRC nongedzo uye ongororo yedu inoratidza kuti 98 muzana yekubata inoitika mushure mechipiri sekondi. Zvakajeka kuti pane vashoma mukana vashandisi vanozoona iyo kushambadzira, ndoda kuitisa nayo. Kune maCMOs kuti vave nekudzoka kune chaiko kune mari dzavanodyara, vanofanirwa kukwidza bhaa pane ese maonero ekushambadza uye nguva-mukutarisa. Eric Wheeler, CEO, 33 Kwese.
Maindasitiri anoteera padivi, vaparidzi nevashambadziri vanofanirwa kutarisa zvakanyanya kushambadziro nguva yepakati-mukutarisa uye kuona kana zviyero zvekushambadzira zviri mukutaridzika kwenguva yakareba zvakakwana kuti zviite mhinduro kana kuita zvine mutsindo. Kuenderera mberi nekumisikidza mari yavo mukushambadzira kwedhijitari, kuwedzera kubatanidzwa, uye kudzivirira nzvimbo dzisingaone, vanofanirwa zvakare kuwedzera mu-feed mafoni uye kuratidza mauniti mumusanganiswa wekushambadzira.
Puzzles dzakaomesesa dzemuchinjikwa dzinogona kugadziriswa kana iwe ukanzwisisa izwi rakakura rakatwasuka pakati pepuzzle. Mumapuzzle mazhinji akaoma aya anowanzo kuve makumi matatu nematatu kana makumi matatu nematatu kuyambuka. 33Pose inovhura dambanemazwi yemhando yepamusoro kushambadzira online.
Tags: 33 mhiri33acrosskushambadza kuonakanzuru yevatapi venhaumrcprogrammatic kushambadziramuparidzi kuita marimaonero ekutarisisa